I-Villa (ukuya kuthi ga kwi-20 pers) kwi-Ski kunye nendawo yokukhwela intaba
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMeindert
Indlu engaphezulu kwe-300 m2 yendawo yokuhlala kunye ne-2000 m2 yegadi inelanga elineembono ezintle kumgama wokuhamba we-ski slope kunye neendlela zokuhamba. Uyilo luyenza ilungele iintsapho ezininzi ezifuna ukuchitha iholide kunye, kodwa zifuna nokuba ngasese. Endlini uneeyunithi ezi-4, nganye inegumbi layo lokuhlambela kunye ne-2/3 yokulala. Ukwanayo nesauna ephangaleleyo ekhayeni lakho.
Kumgama wokuhamba uya kufumana iindawo zokutyela ezimnandi ezingabizi kakhulu. Bhala ngoku kwaye wonwabele uxolo nendawo!
Unayo yonke indlu kuwe, ibanzi kakhulu. Kukho iikhitshi ezi-2 ezintsha ngokupheleleyo endlwini enazo zonke izinto ezibandakanya i-dishwasher. Ukwanayo nesauna enkulu ekhayeni lakho. Ebusika ungahamba uye kwi-ski slope kunye ne-skis yakho egxalabeni lakho kwaye ehlotyeni unokonwabela ukuhamba okuthandekayo ukusuka kumnyango wangaphambili, kodwa unombono omhle weCarinthia ukusuka kwibalcony. Kuyamangalisa ukuvuka kwibalcony kunye nokuntyiloza kweentaka ehlathini kwaye ukuba unethamsanqa elincinci ixhama egadini.
Umoya ucoceke kangangokuba iHochrindl iye yabhengezwa njengeholide yezempilo yemozulu. Indawo yokutyibiliza ayinkulu kakhulu, kodwa inamathambeka awoneleyo kuwo onke amanqanaba ukuba ayonwabele. Ngaphandle kwento yokuba sinendlu iminyaka eyi-7, asikafiki kuyo ngokwethu, kodwa ukuba ufuna iindawo zeski zaseBad-Kleinkircheim kunye neTurracher Höhe zinokufikelelwa kwisiqingatha seyure.
Umphathi wethu uhlala kufutshane oya kukunceda ngovuyo ngeengcebiso kunye noncedo.
Ewe ndiyakwazi ukufumaneka ngefowuni nange-imeyile. Sifuna ukwenza yonke into ukwenza ukuhlala kwakho kube kuhle kangangoko sinakho.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$679